Ogaden News Agency (ONA) – Munaasabadda Sanadguurada asaaska JWXO oo Gud.Ku-Xigeenka JWXO uu kala qaybgalay jaaliyadda Melbourne
Maanta oo ay taariikhdu ku beegan tahay 08/9/13 waxaa gobalka Victoria ee Magalada Melbourne laga xusay sanadguuradii 29aad ee jabhada wadaniga xoraynta ogadenia xafladan oo ahayd mid aad ubalaadhan si quruxbadana loosoo agaasimay ayaa waxaa kasoo qaybgalay bulshada qaybaheeda kala duwan sida odayaasha, haweenka, aqoonyahanada, Culumada, Fanaaniinta Melbourne kooxda Halgan iyo Abwaan Cabdullahi Dhariiq (Jaamis). Sidoo kale Ururka Dhalinyarada iyo Ardayda Ogadenia ayaa si fiican uga soo qaybgalay xafladan oo ahayd mid aad looga soo shaqeeyay oo ay soo diyaariyeen islamarkaana soo bandhigeen howlwadeenada Jaalliyadda Melbourne iyo ururka OYSU. Xaflada ayaa bilaabatay abaare 5:00pm.
Waxaa sidii caadada ahayd lagu furay aayadaha quraanka kariimka ahiyo wacdi diini ah oon ilaahay ka baryayno inuu inagu anfaco, ka dibna waxaa loo istagay heestii calanka. Mudane Hassan Qubbi oo shirka si aqoon iyo xirfadi ku dheehantahay u daadihinayay ayaa ku soo dhaweeyey gudoomiyaha jaaliyada magaalada Melbourne Xikam Sheikh oo shirka furay isagoo u mahad celiyey qabanqaabiyaashii shirka iyo dhamaan dadweynaha ka soo qayb galay wuxuuna si kooban uga hadlay jaaliyada iyo wax qabadkeeda.
Waxaa mic lugu soo dhaweyey Sumeya cabdi macalin iyo samiira muxumed oo aha gabdho yar yar oo ku dhashay Australia waxeeyna soo bandhigeen gabayo lugadaha engriska ah qabayadaas oo ku abuuray qushuuc dadkii meesha isugu yimid. Gabdhahaas oo da dadu aad u yartahay ayaa ka dhiidhiyay dhibka uu quumeysigu ku hayo dadkooda iyo dalkooda.
Fartun dhahir iyo Hani cabadullahi ayaa iyana ka soo jeediyay baraanbur iyo qabayo eey dadweeynihii aad iyo aad uga heleen. Ka dib waxaa mic lugu soo dhaweyey gudoomiyaha ururka dhalinyara Oysu Melbourne oo halkaas ka soo jeediyay qudbad qaaban. Ka dib, waxaa hadalka qaatay gudoomiye ku xigeenka Jaaliyada Melbourne hasan ahmednur wuxuuna ka soo sheekeeyey wax yaabihii uu goob jooga ka ahaa isagoo sheegay in cadowga koobaad ee Soomaaliya iyo S.Ogaadeeniyaba yihiin amxaarada taasina aan wax shaki ahi ku jirin maantana Soomaali oo dhani ay u kala dhuumanyaan cadowgoodii soo jireenka ahaa taasina ay nasiib daro tahay.
Waxaa in mudo ah la sugayey Dr Mohamed Ismail Omar gudoomiye ku xigeenka ee Jabhada Wadaniga Xoreynta ogadenia. Waxaa is qabsaday sawaxan iyo farxad markuu bilaabay hadalkisa, wuxuuna ka warbixiyay xaalada halganka gudaha Ogaadeeniya ka socda iyo xaalada ay ku sugan yihiin shacabka iyo cuna qabataynta ay Wayaanuhu ku hayaan shacbiga dulman. Wuxuu kaloo ka hadlay dhinaca naftood hurayaasha isagoo sheegay in ay maanta ugu awood badan yihiin aadna isugu kalsoonyihiin Ilaahayna talo saarteen. Wuxuu aad ugu mahad celiyey jaaliyadaha reer Ogaadeeniya ee ka halgamaya dibadaha iyagoo mar walba ay soo wajahayaan duruufo adagi. Wuxuu kula dardaarmay in ay sii labo laabaan halganka si aynu u gaarno yoolkeena oo ah wax aan ka yrayn xoriyad.
Qaar ka mid ah odayaasha ayaa si kooban uga hadlay taariikhda dhulka Soomaalida Ogaadeeniya iyo sida uu halganku u socdo iyo waxa looga baahanyahay jaaliyadda iyagoo carabka ku dhuftay hadii aynaan halganka maanta taageerin inay taariikhda ina xusi doonto.
Munaasabada waxaa lagu soo gabo gabeeyey ciyaarihii hidaha iyo dhaqanka Soomaalida Ogaadeeniya ee dhaantada ahay iyo gudoomiyaha jaaliyada Xikim sheikh oo halkaas ku gudoonsiiyay ashahdo sharaf ururka haweenka, ururka oysu, muqaaxida caanka ah ee safarai, abwaan jamis iyo kooxda halgan iyo dad aad u badn oo aan halkan magacyadooda aan aan ku soo koobi Karin. wuxuuna ku soo dhamaaday farxad.